Apple enyelarị ozi na ọnọdụ okporo ụzọ na Paris | Esi m mac
Apple enyelarị ozi na ọnọdụ okporo ụzọ na Paris
Apple na-aga n'ihu na-emezi ngwa Apple Maps n'ụzọ dị mma na eziokwu bụ na enwere ụzọ dị ogologo tupu ngwa ọrụ ahụ amata na mgbe ọ bụla ọ ga-eme ka ọ na-emelite onwe ya oge niile, mana n'echiche a, ụlọ ọrụ Cupertino bụ inweta ala na taa Ozi banyere ọnọdụ okporo ụzọ na Paris ruru Maps. Ya mere, onye ọrụ Apple ọ bụla chọrọ ịlele ozi oge okporo ụzọ nwere ike ime ya ugbu a na ngwaọrụ iOS ọ bụla ma ọ bụ site na Mac na iji ngwa Maps.
Ọrụ nke mmelite a na ezigbo ozi okporo ụzọ dị mfe ma baa uru maka ndị niile ga-agagharị na obodo ahụ, ebe ọ bụ na awade site na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ oroma edoghi ebe nke obodo ebe okporo ụzọ na-ejupụta na ozugbo ma n'ụzọ dị otu a anyị ga - ahọrọ okporo-ụzọ ndị ọzọ iji ruo ebe anyị na - aga n’enweghị ijute okporo ụzọ ahụ. Zọ dị mma iji hụ ma ụzọ aga ebe anyị na-aga nwere mkpọchi ma ọ bụ na ọ bụghị.
N'oge Apple na-enye nhọrọ a n'ọtụtụ obodo dị mma, mana o doro anya na ọ nwere ogologo ụzọ ọ ga-aga iru karịa n'agbanyeghị na ọ dị na ụfọdụ n'ime ihe kachasị mkpa na mba ọ bụla. Na nke aNa mgbakwunye na ozi okporo ụzọ, nhọrọ ozi njem ọha na-dịkwa, n'ihi ya, ha nwere ngwa 100% na-arụ ọrụ na nke a. Olileanya Apple na-aga n'ihu na mmelite ndị a na ngwa Maps ndị na-enweta ndozi mgbe niile na obere obere na-ejide onye isi ya, Google Maps.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple enyelarị ozi na ọnọdụ okporo ụzọ na Paris
Igha videos videos na QuickTime
Telegram emelitere na mbipute 2.96 na ndozi na ọsọ nke ngwa ahụ